လက်စွပ်သို့မဟုတ်အလျားလိုက်ဘက်ထရီညွှန်ပြချက်ကိုသင်၏ Samsung Galaxy ထဲသို့ထည့်ပါ Androidsis
Manuel Ramirez | | Android application များ, Android ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ
ဖြေရှင်းနည်းများကိုရှာဖွေပြီးအတွေ့အကြုံတိုးတက်စေရန်ကောင်းသောပရိုဂရမ်မာများ၏လက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Energy Ring နှင့် Energy Bar ဟုခေါ်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းနှစ်ခုရှိသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Galaxy S8, S9, S10, S10e, S10 +, Note 9, Note10, Note 10 5G နှင့် Note 10+ တွင်လက်စွပ်သို့မဟုတ်အလျားလိုက်ဘက်ထရီညွှန်ပြချက်ရှိသည်။
တစ် ဦး ကလက်စွပ် -shaped ဘက်ထရီညွှန်ပြချက် Galaxy S10, S10e, S10 + မော်ဒယ်များ၏မျက်နှာပြင်ရှိအပေါက်များကိုဝိုင်းရံထားသည်, Note 10, Note 10 5G နှင့် Note 10+, Galaxy S8, S9 နှင့် Note9တို့အတွက်ဘားတစ်ခုရှိနေစဉ်သင်၏ Galaxy terminal များသို့စတိုင်ထိတွေ့မှုတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်ရန်ပြုလုပ်မည်။
1 Note 10၊ 5G နှင့် Note 10+ အတွက်စွမ်းအင်ကွင်းဆက်
2 Galaxy S10 /e/ 5G နှင့် + အတွက် Enery Ring
3 စွမ်းအင် Bar- က S8, S9 နှင့် S10 + များအတွက်ထုတ်ဝေကွေး
4 Energy Bar - Galaxy Note 8 အတွက်ကွေးကောက်ထုတ်ဝေမှု
Note 10၊ 5G နှင့် Note 10+ အတွက်စွမ်းအင်ကွင်းဆက်
ဒီလက်စွပ်ဘက်ထရီညွှန်ပြချက်လုပ်နိုင်ပါတယ် အရွယ်အစား 1 အထူ pixel ကနေသတ်မှတ်ထားသည် တစ် ဦး ဒိုးနတ်၏နီးပါး။ အောက်ပါအက်ပ်များကဲ့သို့ CPU အရင်းအမြစ်များကိုသုံးစွဲမှုခဲသည်၊ ၎င်းသည်ဘက်ထရီပမာဏအပြောင်းအလဲအချို့ကိုသာထင်ဟပ်စေသည့်နည်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၎င်းကို configure လုပ်ခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည် တန်ပြန်ဆန့်ကျင်သို့မဟုတ်လက်ယာရစ်သွားပါနှင့်၎င်းကိုအက်ပ်များ၊ ဗွီဒီယိုများ၊ ရုပ်ပုံများနှင့်အခြားအရာများတွင်ဝှက်ထားနိုင်သည်။ သင်ကဘက်ထရီအဆင့်နှင့်အရောင်အစိတ်အပိုင်းများအရအလိုအလျောက်အရောင်များကိုပြောင်းလဲရန်က configure လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဤအက်ပလီကေးရှင်း၏အထူးခြားဆုံးအချက်မှာ၎င်းကို configure လုပ်နိုင်သည် ကွဲပြားခြားနားတဲ့ကာတွန်းတွေကိုစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ပေါ်မူတည်ပြီးသတ်မှတ်ပါ ကြောင်း device ကိုချိတ်ဆက်ထားသည်။ Lock screen မှာတင် Ring ကိုပြသနိုင်ဖို့ Accessibility Service access ကိုလိုတယ်။
Energy Ring - ၁၀ / 10G / Lite / + ဘက်ထရီညွှန်ပြသူ။
Galaxy S10 /e/ 5G နှင့် + အတွက် Enery Ring
ဒါဟာအတူတူပင် app ဖြစ်ပါတယ် ယခင်တ ဦး တည်းနှင့်အတူတူဆော့ဖ်ဝဲရေးသူကဒီဇိုင်း, သို့သော်၎င်း၏ကွဲပြားခြားနားသောမော်ဒယ်များအတွက် Galaxy S10 ၏မျက်နှာပြင်ရှိအပေါက်များအတွက် optimized ။ ဒါကြောင့် Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy S10 5G နှင့် Galaxy S10 + အတွက်; စကားမစပ်လက်လွတ်မထားဘူး လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကပြုလုပ်ခဲ့သော Galaxy S10 + နှင့် Note10 + နှင့်နှိုင်းယှဉ်ချက်.
သင်သည်ယခင်အက်ပ်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ချက်များကို အသုံးပြု၍ ၎င်းသည်အရင်းအမြစ်များကိုမသုံးသောအက်ပ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြနိုင်သည်။ Developer ကတောင်သင်မျက်နှာပြင်ကိုပိတ်လိုက်သောအခါ၎င်းသည်နက်ရှိုင်းသောအိပ်စက်ခြင်းသို့မဟုတ်နက်ရှိုင်းသောအိပ်စက်ခြင်းကိုထည့်သည်။ သင့်တွင်ဖုန်းများရှိပါကသင့်တွင် Google Play စတိုးမှအခမဲ့အက်ပ်ရှိသည်။ သုံးသပ်ချက်ပေါင်း ၃,၉၀၀ ကျော် 4,2 ၏အမှတ်ပျမ်းမျှအား ၎င်းသည် Samsung Galaxy S series များ၏မတူညီသောမော်ဒယ်များ၏ဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိထိုတွင်းပေါက်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်သင့်အားအထောက်အကူပြုမည့်အလွန်အသုံးဝင်သောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Energy Ring - Galaxy S10 /e/ 5G / + ဘက်ထရီပြညွှန်ခြင်း!
စွမ်းအင် Bar- က S8, S9 နှင့် S10 + များအတွက်ထုတ်ဝေကွေး
ငါတို့အထက်ပါဆိပ်ကမ်းများမဆိုရှိပါက ဒါမှမဟုတ်လက်စွပ်ညွှန်ပြချက်ကိုငါတို့မကြိုက်ဘူး, ကျွန်တော်တို့စွမ်းအင်ဘားကိုရွေးချယ်နိုင်သည်၊ တူညီသောတည်ဆောက်သူမှအက်ပလီကေးရှင်းကို အသုံးပြု၍ မည်သည့်ဘက်ထရီမည်မျှရှိသည်ကိုအရောင်ဖြင့်ဖော်ပြရန်အပေါ်ဘက်ရှိ status bar ကိုအသုံးပြုသည်။
အပြင်လက်ရှိဘက်ထရီအဆင့်ကိုညွှန်ပြအပြင်ကလည်း သင်ချိတ်ဆက်ပြီးသည်နှင့်မည်မျှဘက်ထရီအားသွင်းကြောင်းပြသည် အားသွင်းစက် ပြီးတော့သူရဲ့ features တွေအကြောင်းပြောရင်အရင် app တွေရဲ့ app တွေကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၄.၄ ဖြင့်မြင့်တက်လာသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်၏ Samsung terminal ၏အခြေအနေဘားတွင်အလျားလိုက်ဘက်ထရီညွှန်ပြချက်ရှိရန်မစဉ်းစားပါနှင့်။
Energy Bar - Galaxy S8 / S9 / S10 + အတွက်ကွေးသော Edition
Energy Bar - Galaxy Note 8 အတွက်ကွေးကောက်ထုတ်ဝေမှု
ဒီဗားရှင်း ၎င်းသည် Galaxy Note 8 အတွက်သီးသန့်ဖြစ်သည် နှင့်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအရာအားလုံးကိုစွမ်းအင်ဘားနှင့်အသုံးပြုမှုနှင့်စားသုံးမှု၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်စပ်လျဉ်း။ လက်စွပ်များနှင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။
una သင်၏ Galaxy Note 8 ၏ကွေးနှင့်ကိုက်ညီသောအက်ပလီကေးရှင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ကိုအသုံးပြုစဉ်အရှည်ဆုံးရှုံးနေသည့်အရောင်ဘားကြောင့်သင့်တွင်ဘက်ထရီမရှိခြင်းကိုအစဉ်အမြဲသိရန်။
နောက်ဆုံးပေါ်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်အက်ပလီကေးရှင်းများ လက်စွပ်ဘက်ထရီညွှန်ပြချက်ထည့်ရန် Galaxy S နှင့် Samsung Note, နှင့်ဤသတ်မှတ်ချက်များမျက်နှာပြင်ရှိအပေါက်များနှင့်၎င်း၏နှစ်ဖက်၏ကွေးခြမ်းနှင့်အတူသူတို့အတွေ့အကြုံကို personalize ဖို့မရှိမဖြစ်ဖြစ်လာသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » ပြီးခဲ့သည့်သုံးနှစ်က Galaxy S and Note တွင်လက်စွပ်သို့မဟုတ်အလျားလိုက်ဘက်ထရီညွှန်ပြချက်ထားရှိခြင်း
ဝယ်လိုအားမြင့်မားသောကြောင့် Samsung သည်ကြိုတင်ရောင်းချမှုအရ Galaxy Fold ၏ယူနစ်အရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်